ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Yacine Adli ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဇြန္လ 16, 2020
မိသားစုနောက်ခံ၊ မိဘများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်အပြည့်အဝတင်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်သူ၏အစောပိုင်းကာလများမှသူကျော်ကြားလာသည့်အချိန်အထိထင်ရှားသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုအပြည့်အဝဆန်းစစ်ထားသည်။
Yacine Adli ၏အစောပိုင်းဘဝနှင့်ထ။ Instagram Instagram နှင့် Twitter
ဟုတ်တယ်၊ သင်နဲ့ငါဟာကွင်းလယ်လူကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာသိပါတယ် စောင့်ကြည့်ဖို့ဥရောပမှာအကောင်းဆုံးလူငယ်တစ် ဦး။ သို့သော်အနည်းငယ်သာ Yacine Adli ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဖတ်ရှုကြပြီးအတော်လေးအထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Yacine Adli ကလေးဘဝအကြောင်း
ပထမဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာဘောလုံးသမား၏မိဘများကသူ့ကိုနာမည်ပေးခဲ့သည် Zinedine ဇီဒန်း, သူ့ကိုအပြည့်အဝအမည်များပေးထားသောတစ် feat ။ Yacine Zinedine Adli ။ သူသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့၏အရှေ့တောင်ဘက်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များဖြစ်သော Vitry-sur-Seine တွင်နေထိုင်သည်။
Yacine Adli သည် Mr နှင့် Mrs Abdennour Adli တို့၏မိဘများကြားတွင်မွေးဖွားလာသည့်ကလေးသုံး ဦး တွင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ဘောလုံးသမားသည် Lounes Adli အမည်ရှိအစ်ကိုနှင့်အစ်ကိုနှင့်အတူပျော်ရွှင်သောကလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။
Adli မိသားစု၏အငယ်ဆုံးကလေးဖြစ်ခြင်းသည်သူသည်သူ့မိသားစု၏ကလေးဖြစ်သည်ကိုပြသသည်။ အစောပိုင်းကတည်းက Abdennour (Yacine ၏အဖေ) သည်သူ၏ကလေးများအားလုံးသည်အသက် ၄ နှစ်အရွယ်တွင်စာဖတ်တတ်ရန်သေချာစေခဲ့သည်။ Little Yacine ဟာခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်ယာစီအဒလီ၏မိဘများကသူ၏အစ်ကိုအကြီးများကိုပိုမိုတာ ၀ န်ယူသော်လည်းသူကိုယ်တိုင်အများအားဖြင့်စိတ်မချရသူများဖြစ်သည်။ သူ့အမေနှင့်အဖေများကအိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ရန်မပို့သောကြောင့်လူငယ်လေးသည်ဘောလုံးအတွက်အချိန်ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤသည်လုပ်ရပ်ကံကြမ္မာနှင့်အတူသူ၏အစောပိုင်းနေ့စွဲမှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ချစ်စရာကောင်းသောကောင်လေးသည် PSG ကိုကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးသူ၏ namesake ကိုအလွန်နှစ်သက်သည် Zinedine ဇီဒန်း ဘယ်သူ့ကိုမှသူကရုပ်တုတစ်ခုထက်ပိုပြီးမြင်သည်။
PSG လူငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့် PSG ကိုလူငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ Twitter Twitter
Yacine Adli မိသားစုနောက်ခံ
ပြင်သစ်ဂိုးသမားနှင့်မတူသည်မှာဘောလုံးသည် ဟူဂို Lloris ဘီလျံနာဘောလုံးသမား Faiq Bolkiah အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအိမ်ထောင်စုတွင်မွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပျမ်းမျှဝင်ငွေနည်းသူများစွာကဲ့သို့ပင် Yacine Adli ၏မိဘများမှာထိုသူများထဲတွင်အခြေချနေထိုင်ကြသည် အများအားဖြင့် Vitry-sur-Seine ၏လူလတ်တန်းစားလူ ဦး ရေနေထိုင်သောအရံဒေသများ။
ပါစီမြို့၏ဗဟိုနှင့် ၁၁.၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသောပြင်သစ်လူမျိုးအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏လက်ထဲတွင် Yacine သည်ပျော်ရွှင်သောအစောပိုင်းနှစ်များဖြစ်သည်။ ကြိုက်တဲ့ဘောလုံးသမားတွေနဲ့မတူတာက Ibrahima Konate ကလေးဘဝတွင်ပဲရစ်တွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ Yacine Adli ၏မိသားစုသည်ဆင်ခြေဖုံးများတွင်သာနေထိုင်ရန်တတ်နိုင်သည်။
ပြင်သစ် Genius သည် Vitry-sur-Seine တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူ၏မိသားစုအိမ်သည်ပဲရစ်သို့ ၁၁.၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ Images Google Images နှင့် IG
Yacine Adli ၏မိခင်နှင့်အဖေ၏ဇာစ်မြစ်ကိုသိခြင်းအပေါ်သူ၏လှပသောအာရေဗျရုပ်လုံးပေါ် မူတည်၍ သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ အမှန်တရားကတော့ဘောလုံးသမားပဲ Legendary လိုပဲ Zinedine ဇီဒန်းသူ၏မိသားစုသည်မြောက်အာဖရိက၊ အတိအကျအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှဖြစ်သည်။
သင်သိပါသလား… Yacine Adli ရဲ့မိဘနှစ် ဦး စလုံးဟာအယ်လ်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းတောင်ထူထပ်တဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ Kabylie ရွာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ သူချင်းဘောလုံးသမားနဲ့မတူတာက Riyad Mahrez, Yacine Adli ၏မိသားစုသည်သူသည် 2019 ၏အာဖရိကဖလားနိုင်ငံများဆုရှင်များ (အယ်လ်ဂျီးရီးယား) အတွက်ကစားခြင်းဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမပေးရသေးပါ။
Yacine Adli ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်တည်ဆောက်မှု
ပါရီမြို့ဆင်ခြေဖုံးတွင်ကြီးပြင်းလာသောဘောလုံးလိုလားသည့်ကလေးငယ်များကဲ့သို့ပင်ယာကင်း၏မိဘများကသူ့အားဘောလုံးအတွက်သူ၏ပညာရေးကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမပြုခဲ့ပါ ပြင်သစ်ဝက်ဘ်ဆိုက် Acufoot က ၂၀၁၇ အစီရင်ခံစာတွင်ဘောလုံးသမားသည်စာသင်ခန်းအတွင်း၌ထောက်လှမ်းရေးကိုမည်သို့ပြသခဲ့သည်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ Yacine Adli သည်ဤထက်မြက်သောကျောင်းသားဖြစ်သည်။
အချိန်ကုန်လာသောအခါဂိမ်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့် Yacine Adli ၏မိဘများကသူတို့၏သားအားဘောလုံးလောကအတွက်ပညာရေးကိုစွန့်လွှတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Yacine Adli သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအုတ်မြစ်ချရန်ခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးသူ့မိသားစုအိမ်နှင့်အလွန်နီးကပ်သော US Villejuif အသင်းတွင်သူ့အဖေကိုစာရင်းသွင်းစေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, သူအောင်မြင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
သူ၏အစောပိုင်းအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းကာလအတွင်းထိုလူငယ်လေးသည်သူ၏ပြဇာတ်များကြောင့်သာမကထူးကဲသောနာမည်ဖြင့်ထူးဆန်းသောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများကြောင့်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကြိုသိပြီးသားစိတ်ဓာတ်ကျသည့်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးဖြစ်လာခဲ့သည်။
တစ်ချိန်ကသူ၏သင်တန်းဆရာ Moulay Chebab သည် Yacine Adli ၏အောင်မြင်မှုရရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ယခင်နည်းပြ၏စကား၌,
ယာစီသည်အားကစားကွင်း၌အိပ်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုနေ့တိုင်းလိုလိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူကအသည်းအသန်ကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ။
ထိုလုလင်သည်အရှုံး၏စိတ်ကူးကိုမခံမရပ်နိုင်။ သူကဘောလုံးချစ်တယ်၊ စကားပြောတယ်၊ စားတယ်။
Yacine Adli အတ္ထုပ္ပတ္တိ - လမ်းပေါ်သွားရန်ပုံပြင်:
ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းအားဖြင့်လူငယ် Yacine သည် US Villejuif တွင်ကစားသည့်ကလေးတွေအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည်အတောက်ပဆုံးဖြစ်ချိန်၌အရာတစ်ခုမှာသေချာလာသည်။ PSG နည်းပြကြီးများသည်သူ၏အရည်အချင်းများကိုပိုမိုကြီးမားသည့်ကလပ်များ၊
ပိုသိသာထင်ရှားသောပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်နှင့်ပြင်သစ်အမျိုးသားလူငယ်တစ် ဦး ကိုဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက် Yacine Adli ၏မိဘများက PSG နှင့်ပူးပေါင်းရန်သားအားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကဒီကြယ်ပွင့်ကြယ်ပွင့်ဟာပြင်သစ် U16 ခေါ်ယူမှုကိုပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့နှစ်နှစ်အကြာမှာရခဲ့တယ်။
သားဖြစ်သူအောင်မြင်လိုသည့်ဆန္ဒကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး Yacine Adli ၏ဖခင် Abdennour သည်သား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက်အလုပ်မှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ Adli မိသားစု၏အငယ်ဆုံးသားသည်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာရန် Yacine ညီဖြစ်သူ Lounes သည် Lounes သည်သူ့အစ်ကိုကိုထောက်ပံ့ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်အေးဂျင့်လိုင်စင်သင်တန်းကိုတက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Yacine Adli အတ္ထုပ္ပတ္တိ - သူအောင်မြင်ခဲ့ပုံ -
ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်မိသားစုကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ဂိုးသွင်းရန်အလားအလာကောင်းသည့်ဘောလုံးသမားသည်သူ၏လူငယ်ဘဝတွင်အတောင့်တင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Yacine သည်အကယ်ဒမီနှင့်အမျိုးသားအဆင့်တွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
ကလပ်နှင့်တိုင်းပြည်အောက်ရှိလူငယ်များ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်အလားအလာရှိသောပြင်သစ်ဘောလုံးသမားအတွက်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။ Instagram: Instagram
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် PSG လူငယ်ဘ ၀ ကိုအရောင်များဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက်သူသည် Paris Saint-Germain B. နှင့်အတူတစ်နှစ်နေခဲ့ရသည် Unai Emery, ထိုသူငယ်ကိုသူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ရကူညီရန်ကြင်နာအလုံအလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိကစားသမားတစ်ယောက်အနေနှင့် PSG ကဲ့သို့အသင်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပထမ ဦး စွာသူ၏ချစ်သူ Emery ကိုအာဆင်နယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၏ထွက်ခွာပြီးနောက် အာရုန်သည်ရမ်းဆေး, Emery သည်အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အားကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေခဲ့သည် ဒင်းနစ်ဆွာရက်ဇ် Yacini နှင့်အတူထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်လာခဲ့သည်။
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာက PSG နည်းပြအသစ်ကိုအပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တာပဲ သောမတ်စ် Tuchel's ကြားဝင်ခဲ့သည် Unai Emery နှင့်အတူလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ဆပ်ပြာအော်ပရာနောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့သည် Mattéo Guendouzi။ PSG အသင်း၏အခြားကွင်းလယ်ကစားသမားများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်လွှဲပြောင်းပေးမှုကြောင့်သူသည်စိမ်းလန်းစိုပြေသော Yacine Adli ကို Bordeaux တွင်ပြသရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သူသည်အရောင်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအထောက်အထား) ။
Yacine Adli ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့်အချိန်တွင် PSG ၏ဆယ်ကျော်သက်ထုတ်လုပ်မှုသည် FC Girondins de Bordeaux နှင့်အတူနာမည်ကြီးနေသည်။
Yacine သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည် ဥရောပတွင်အများဆုံး 'အဖိုးတန်' အလယ်ပိုင်းကွင်းလယ်လူ။ ကြွင်းသောအရာ, ငါတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Yacine Adli ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးရသူ၊ ရည်းစား၊
ပြင်သစ်ဘောလုံးသမား၏ဆက်ဆံရေးဘဝအကြောင်းကိုစူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်းပြသောပရိသတ်များကစတင်စဉ်းစားလာကြသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် Yacine Adli ဟာထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မှုထဲမှာပါဝင်တယ် အများဆုံးချောမောဘောလုံးကစားသမား လက်ရှိကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာ။ သူ၏ချစ်စရာပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်မိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုထင်သောသူများ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ဇနီးသည်များဟုထင်ကြသူများကိုပင်ငြင်းဆန်။ မရပါ။
သူဟာအရပ်ရှည်ပြီးလှပတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကစပြီးမေးလာကြပါတယ်။ Yacine Adli's Girlfriend ကဘယ်သူလဲ။ Instagram: Instagram
စာရေးခြင်းအချိန်တွင်ချောမောသောဘောလုံးသမားသည်သူ၏ရည်းစားအားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်သူ၏နောင်ဇနီးမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Yacine (အရေးအသား၏ထိုအချိန်က) တစ် ဦး တည်းသောဖြစ်နိုင်သည်, WAG ၏တည်ရှိမှုမရှိကြောင်းဆိုလိုသောကြေညာချက်။
ကောင်းပြီ၊ သင်နှင့်ငါဘောလုံးသည်ချိန်းတွေ့ခြင်းကိစ္စများနှင့်အထူးသဖြင့်ဤအစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအဆင့်တွင်ရောနှောခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခါဘောလုံးကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြောင်းကိုသင်သိသည်။ ဤသည် Yacine သည်သူ၏ရည်းစားကိုထုတ်ဖော်ရန်သေးသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘောလုံးကွင်းမှဘောလုံးသမားနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးသတိပြုမိသည့်အချက်မှာသူ၏“ ရင့်ကျက်မှု” ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကသူ၏အစ်ကိုကြီး Lounes က Yacine သည်ရှက်တတ်ပြီးစဉ်းစားဟန်ရှိသောသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုကြီးပြင်းလာသူများနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည် ဤသည်, အခြားသူများအကြား, လူတိုင်းကသူ့ကိုနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ ကြယ်ပွင့်သည်ကင်ဆာရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ သင်သိပါသလား။ …လူသားများပိုင်ဆိုင်သောထိုလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုမှာရေသို့မဟုတ်အနီးအနား၌အနားယူရန်သူတို့၏သဏ္isာန်ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များကသူနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တစ်ခါမျှမသိခဲ့သည့်အရာများကိုဖော်ပြသည်။ Instagram: Instagram
အများအားဖြင့်သူ့အစ်ကိုနှင့်အတူ Yacine Adli သည်စစ်တုရင်ကစားသည်။ ဘောလုံးကြယ်သည်တယော၊ စန္ဒရားနှင့်ဂစ်တာတို့ကိုလည်းနှစ်သက်သည်။ သူသည်နားလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ဂစ်တာတီးတတ်ရန်သင်ယူခဲ့သည်။ Adli ကသူ၏ဖခင်သည်ဂီတကျောင်းတွင်ကျောင်းတက်ခဲ့လျှင်သူသည်ချစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့သည်
Yacine Adli လူနေမှုပုံစံစတဲ့:
ဘောလုံးသမားသည်သူ၏ပိုက်ဆံများကိုမည်သို့သုံးစွဲသနည်း။ ပထမ ဦး စွာ၊ ထူးခြားသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိ။ ပထမ ဦး စွာယူရို ၃၀၀,၀၀၀ ယူရို ၃၀၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် Yacine Adli သည်စနစ်တကျနေထိုင်ပြီးကြီးမားသောအိမ်များနှင့်ကားများကဲ့သို့သောအရာများအတွက်အသုံးမကျသောအသုံးစရိတ်များကိုဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
Yacine Adli ၏လူနေမှုပုံစံ - ဘောလုံးသမားသည်မိမိ၏ငွေကြေးကိုမည်သို့ဖြုန်းတီးသည်၊ 📷: IG
Yacine Adli မိသားစုဘဝ
သူတို့၏အိမ်တွင်ဘောလုံးသမားများရှိသောလူအများစုကတစ်နေ့တွင်မိသားစုနာမည်ကိုအကြီးမားဆုံးအဆင့်တွင်ဂုဏ်ယူစွာယူဆောင်လာကြသည်။ ဤသည်မြင့်တက်ပြင်သစ်ကြယ်ပွင့်အမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ၊ မင်း Yacine Adli ရဲ့မိသားစု ၀ င်တွေအကြောင်းကိုသူ့မိဘတွေနဲ့စပြောပြပါမယ်။
Yacine Adli ၏ဖခင်နှင့်မိခင်အကြောင်း:
အစမှ စ၍ မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်သူတို့၏ကလေးသုံးယောက်အတူတကွရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုတည်ထောင်သောအမြော်အမြင်ရှိတွေးခေါ်သူများဖြစ်သည်။ မင်းသိသလား ... Abdennour နှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည်မှုတ်သွင်းခံများဖြစ်သည် Lebron ဂျိမ်း, Kylian Mbappe နှင့် နေမာ တစ်ဘောလုံးဗဟိုပြုအိမ်ထောင်စုကို run ရန်။ Yacine ၏အဖေနှင့်အမေနှစ် ဦး စလုံးသည်အထက်ပါဘောလုံးသမားများကိုသူတို့၏အလုပ်အကိုင်တွင်မိသားစု ၀ င်များရှိသူများအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Adli ၏ကျော်ကြားသောအတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်လမ်းသည်သူ၏အဖေသည်အလုပ်မှထွက်ခွာရန်အပြီးသတ်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကိုမြင်ပြီးသူ၏သားကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ Abdennour သည်သူ့သား၏အောင်မြင်မှုကိုရိတ်သိမ်းနေသည်။
Yacine Adli မောင်နှမ:
အဆိုအရ ယူရိုပြိုင်ပွဲပြင်သစ်Yacine တွင်အစ်မနှင့် Lounces Adli အမည်ရှိသောညီတစ်ယောက်ရှိသည်။ ဦး ဆုံးအစ်ကိုအစ်မသည်လယ်ကွင်းကို အသုံးချ၍ အစ်ကိုဖြစ်သူကိုကူညီရန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလေ့လာခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Yacine ၏အစ်ကိုကြီး (Lounes Adli) သည်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကိုလေ့လာသင်ကြားခဲ့သည်။ သူ၏လေ့လာမှုပြီးဆုံးပြီးနောက် Lounes သည်သူ၏အေးဂျင့်လိုင်စင်လက်မှတ်ရရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သင်တန်းတက်ခဲ့သည်။ အစ်ကိုကြီးကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် Yacine ရဲ့အလုပ်အတွက်လည်းအသုံးဝင်လာတယ်။ တကယ့်စည်းလုံးတဲ့မိသားစုပါတကား!
Yacine Adli အချက်အလက်:
အဖြစ်မှန် # ၁- သူ၏ညံ့ဖျင်းသောလစာပျက်ပြားမှုကသူ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုဖော်ပြသည်:
PSG ကိုလိဂ်ပြိုင်ဘက် FC Girondins de Bordeaux အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ရွေးချယ်ထားသောဘောလုံးသမားသည်သူ၏လစာပြတ်လပ်မှုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းငွေကြေးအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ Yacine ဟာရင့်ကျက်တဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာအချိန်မရွေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်နဲ့ဝင်ငွေအရရောကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။
တစ်နှစ်လျှင် € 336,000 £ 297,121 $368,608
တစ်လလျှင် € 28,000 £ 24,760 $30,717
တစ်ပတ်လျှင် € 7000 £ 5,705 $7,078
တစ်နေ့လျှင် € 1000 £ 815 $1,011
တစ်နာရီ € 41.6 £ 33.96 $42
တစ်မိနစ်နှုန်း € 0.69 £ 0.57 $0.71
တစ်စက္ကန့်လျှင် € 0.01 £ 0.009 $0.01
ဤသည်ကားအဘယ်သို့ Yacine Adli သင်ဤစာမျက်နှာကိုစတင်ကြည့်ရှုစတင်ကတည်းကရရှိခဲ့ပါပြီ။
သင်သိပါသလား… ၀ င်ငွေရှိသောယူရို ၃၀၉၃ ၀ င်သောပျမ်းမျှအားဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ကိုးနှစ် နှင့် တစ်လ Yacine တစ်လအတွက်ရရှိသောအရာကိုလုပ်ဖို့။ ဝိုင်း! ဆိုလိုတာကသူ့ထင်ထားတာကသူ့လစာကသိပ်မများဘူး။
အဖြစ်မှန် # ၁- FIFA ၏အလားအလာ
Yacine သည်သူ၏အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိသည် အကြီးမြတ်ဆုံးကွင်းလယ်လူ သူ့သားစဉ်မြေးဆက်။ ဒီနူးညံ့သောအသက်အရွယ်တွင် ၆ ပေ ၁ ကွင်းကွင်းသည်ဘောလုံးထိန်းချုပ်မှု၊ ရူပါရုံ၊ အနားယူနိုင်မှု၊ FK တိကျမှန်ကန်မှု၊ ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်း၊
ဖီဖာအလားအလာကသူ၏မျိုးဆက်၏အကြီးကျယ်ဆုံးကွင်းလယ်လူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ So SoFIFA
အဖြစ်မှန် # ၁- သူသည်သူ၏အေးဂျင့်အား Top Footballers နှင့်မျှဝေသည်။
သင်သိပါသလား… Yacine Adli ဟာသူ့မိသားစုကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ပေမယ့်သူ့မှာအေးဂျင့်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဘောလုံးသမားသည်ပြင်သစ်ကစားသမားများနှင့်အတူတူပင်သူနှင့်တူသည် Moussa Sissoko, Ousmane Dembele နှင့် Layvin Kurzawa ။
အဖြစ်မှန် # ၁- သူသည် Zidane နှင့်အလားတူနာမည်ကိုခံသည်။
သင်သိပါသလား… Yacine Adli မိဘများကိုမွေးဖွားချိန်တွင်သူသည်ပြင်သစ်ဘောလုံး Legend ပြီးနောက်သူ့ကို Zinedine ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ Zinedine ဇီဒန်း။ အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်သူ့ကိုနာမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ပထမတစ်ခုမှာ Yacine Adli ၏မိသားစုသည်ပြင်သစ် ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဆုရှင် Zidane နှင့်အတူတူအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ၁၉၉၈ ပြင်သစ်ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်သူ၏အမြတ်ထုတ်မှုကြောင့်၎င်းသည်ဘောလုံးသမားအားဂုဏ်ပြုသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင် Yacine ကိုကမ္ဘာ့ဖလားပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။
နာမည်အပြည့်အစုံ: Yacine Zinedine Adli
မွေးဖွားခဲ့ပြီး: ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၀ (မေလ၊ ၂၀၂၀ တွင်အသက် ၁၉ နှစ်) ။
မိသားစုမူလအစ: Kabylie ကျေးရွာ, အယ်လ်ဂျီးရီးယား။
မိဘများ - မစ္စတာနှင့် Mrs Abdennour Adli
အစ်ကို: Lounes Adli (ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး)
ခြေထောက်အမြင့်6ပေနှင့် 1 လက်မ
မီတာအမြင့် 1.86 မီတာ
ဝါသနာ: တယော၊ စန္ဒရားနှင့်ဂစ်တာတီးနေသည်။
အသားတင်တန်ဖိုး € 300,000 (မေလ, 2020 ကိန်းဂဏန်းများ)
Yacine Adli ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနှင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ခင်ဗျားတို့ပျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် LifeBogger မှကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာများသည်အစောပိုင်းဘဝပုံပြင်များနှင့်ဘောလုံးသမားများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုဖြန့်ဝေသည့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုကြင်နာစွာဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် Adli ပေါ်ရှိဤဆောင်းပါးတွင်မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ပါက။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားဘာထင်သလဲဆိုတာမှတ်ချက်အပိုင်းမှာပြောပါ။
Djibril Cisse ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Karim က Benzema ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 16, 2020